Toliara : Mpianatra 20 voan’ny Ambalavelona
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2014 → mars → 22 → Toliara : Mpianatra 20 voan’ny Ambalavelona
Mirongatra ny aretina Ambalavelona any Toliara amin’izao. Nanomboka ny talata teo, raha ny angom-baovao, dia efa tafakatra 20 ireo ankizivavy mpianatra tratran’ity aretina hafahafa ity. Omaly maraina, nandritra ny fotoanan’ny fakan-drivotra, ankizivavy mpianatra taona fahadimy ao amin’ny sekoly iray Mahavatse Toliara no nihizitrizitra sy nikiakiaka be ary tsy nahatsiaro tena avy eo. Ny alarobia teo, mpianatra sivy no indray tratra ary samy nilaza izy ireo fa nahita vehivavy niakanjo fotsy lavabe sady misaringobolo tao an-dakilasy. Taorian’io dia nihetsika Ambalavelona. Tsy afa-manoatra ity sekoly ity amin’ny fisorohana ny aretina, afa-tsy ny mivavaka. Izay ankizy voa dia aterina any amin’ny ray aman-dreniny. Tsy mifidy saranga ihany koa ny voan’ny aretina, na mafy ady na zanaky mpanana, dia mifanintona avokoa.
Raha ny loharanom-baovao dia efa tany amin’ny volana desambra 2013 no efa niseho ny trangan’Ambalavelona tao amin’ny sekoly, fa nafenin’ny tompon’andraikitra, noho ny henatra. Dia ho sanatria ve hiandry ankizy mpianatra an-jatony voa vao vakina ny vay maharary sy hihetsika ? Raha ny andron’ny omaly no iverenana sy asian-teny kely, sarotra ny fahazoam-baovao sy fanangonam-bavao tao amin’ny sekoly. Tsy navelan’ny tompon’andraikitra nanao ny asany araka ny tokony ho izy ny mpanao gazety. Tsy nahazo naka sary ny zava-nisy ihany koa.
Raha ny angom-baovao tao amin’ity sekoly ity ihany dia ireo ankizy miala sakana amin’ny kilasy taona fahadimy sy fahefatra no betsaka voan’ny Ambalavelona ao Mahavatse, ka mahavalalanina ny rehetra. Efa andro maro izay, mahoraka be ao Toliara ao ihany koa ny fisian’ny « Club Satanique ». Ny fahamarinany na tsia aloha hatreto mbola tsy voaporofo, nefa raha izao zava-mitranga eo amin’ny mpianatra ao amin’ny sekoly izao, mahalasa saina ihany, hoy ireo ray aman-dreny sendra anay.